I-Majestic Island Getaway e-Wainiha Kufuphi noLwandle! - I-Airbnb
I-Majestic Island Getaway e-Wainiha Kufuphi noLwandle!
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguOceanfront Realty International
I-90% yeendwendwe zakutshanje inike uOceanfront Realty International iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Yiya eKe'e okanye kwiiTunnels zobona buhle be-snorkeling, ukuqubha kunye nokudlala. Okanye thatha uhambo ukuya kwidolophu yaseHanalei ukuze ufumane iilwandle ezinomfanekiso othe kratya kunye nokuthenga kunye nokutya. Indawo efanelekileyo yokubaleka yosapho kunye nabahlobo, uya kulithanda eli khaya likuMntla Shore!
Wamkelekile kuHale 'Oli, Indlu yolonwabo. Indawo egqibeleleyo yokuphumla kwezothando okanye iholide yosapho ekhumbulekayo. Eli khaya liphangaleleyo lesiqithi libonelela ngobumfihlo kunye nokuhamba ngokulula ukuya elunxwemeni. Kufuphi ezinye zeelwandle ezidume kakubi kwihlabathi! Yiya eKe'e okanye kwiiTunnels zobona buhle be-snorkeling, ukuqubha kunye nokudlala. Okanye thatha uhambo ukuya kwidolophu yaseHanalei ukuze ufumane iilwandle ezinomfanekiso othe kratya kunye nokuthenga kunye nokutya. Indawo efanelekileyo yokubaleka yosapho kunye nabahlobo, uya kulithanda eli khaya likuMntla Shore!
Ifumaneka kumgama nje wokuhamba imizuzu embalwa ukusuka elwandle, iilanais ezintathu eziqaqambileyo ezinomoya, iimbono ezintle zeentaba ze-Haena eziqingqiweyo (kubandakanya iNtaba yeMakana) kunye nemvula eqaqambileyo-enombono othile wolwandle ukusuka kwi-lanai ejonge empuma enomoya ovuthuzayo wolwandle ongenakuthelekiswa nanto.
Konwabele ukwenza ukutya okuphekiweyo okutsha kunye nezithako zesiqithi esimnandi kwikhitshi elixhotyiswe kakuhle kwaye eliphangaleleyo ngelixa uncokola nabahlobo kunye nosapho kwigumbi lokuhlala elitofotofo elixhotyiswe ngazo zonke izinto eziluncedo zale mihla: iTV yesathelayithi, iCD, iDVD / VCR, i-intanethi enesantya esiphezulu. Izindlu zokulala zixhotyiswe kakuhle ngeelinen ezintsha ezikrisimesi, imiqamelo kunye nebhedi. Njengakumakhaya amaninzi eKauai, le holide irentwayo ayinamoya.
Amanyathelo ukuya eWainiha Ku'au Beach. Ukuhamba okufutshane ukuya kwiiTunnels, iKee Beach, iHaena Beach Park, iKalalau Trail, kunye nolwandle lwaseLumahai. Imizuzu elishumi elinesihlanu ukuya eHanalei, eminye imizuzu emihlanu ukuya ePrinceville kwigalufa kunye nokukhwela ihashe.
Ukuzola kwaye uphumle, yiva urhwebo kwaye umamele amaza ngexesha lonyaka. UHale Oli uya kuba yintandokazi yosapho ukuba abuyele kwakhona kwaye kwakhona.
*Ukufumana ulwazi malunga ne-Covid-19 ehambelana nemithetho yokuhamba kunye nezikhokelo nceda undwendwele iwebhusayithi ye-County yaseKauai.
*Iimoto ezirentwayo eKauai zisenokuba zinqongophele, nceda ubhukishe iimfuno zakho zokuhamba kwangoko.
*Nangona eli khaya line-intanethi, isantya kunye nokuthembeka akunakuqinisekiswa ngenxa yendawo ekude kunye nenkonzo enikezelwa ngumntu wesithathu.
4.71 · Izimvo eziyi-26
Umbuki zindwendwe ngu- Oceanfront Realty International
Izimvo eziyi-2 322
Inombolo yomthetho: 580120200000